श्रीमानले यस्तो यौनआनन्द कहिल्यै दिएनन पैसाले २४ बर्से ठिटो पालेर मज्जा लिन्छु “ - Social Video Khabar
श्रीमानले यस्तो यौनआनन्द कहिल्यै दिएनन पैसाले २४ बर्से ठिटो पालेर मज्जा लिन्छु “
लाहुरेनी भन्छिन ” पतिले यस्तो यौनआनन्द कहिल्यै दिएनन पैसाले २४ बर्से ठिटो पालेर मज्जा लिन्छु “वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ ? देहसुख अर्थात् सेक्समात्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ।उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्।
उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द। यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमारु अनि यसका जटिलता के–के हुन्रु अम्मर जिसीले केलाउन खोजेका छन्।
केस नं १:
केस नं २:
कमला नामकी ४६ वर्षीया महिलासँग उनको ‘चक्कर’ छ। उनको घर विवेकको डेराछेउ छ। कमलासँग किरानापसलमा भेट भएको र एक महिनाको हाई–हेलोपछि सम्बन्ध सुरु भएको विवेकले बताए। कमला एक छोरा र एक छोरीकी आमा हुन्। उनका श्रीमान् दुबईमा छन्। ‘छोराछोरी स्कुल पठाएपछि मलाई फोन गर्छे,’ विवेकले आफ्नो ‘ड्युटीआवर’ बारे सुनाए, ‘त्यसपछि म उसको घर जान्छु।
र, ४ बजेसम्म उतै बस्छु प्रायः।’ कमलाले विवेकका सम्पूर्ण आर्थिक समस्या टारिदिने गरेकी छन्। पेट्रोल खर्च, मोबाइल रिचार्ज, पकेटमनी सबैथोकको जोहो कमलाले नै गर्ने गरेको विवेकले बताए।एसएफ (सुड्डी फ्रेन्ड) को आवश्यकता मैले पूरा गर्दिन्छु, मेरो आवश्यकता उसले,’ विवेकले भने, ‘मसँग हुँदा त बूढीमाउ ‘फेरि टिनएजमा फर्केझैँ लाग्छ’ भन्छे।’
केस नं ३:
काठमाडौँ, सुकेधाराका अविनाश प्रायः बागबजारमा भेटिन्छन्। ‘आन्टीले बोलाइरहन्छिन्,’ बागबजार धाउनुको कारण सुनाउँछन् उनी, ‘आफू त आन्टीको सेवक न परियो। जहिले बोलायो, तहिले आइदिनुपर्छ।’ ४४ वर्षीया आन्टीलाई हरबखत सेवा दिन तत्पर अविनाश २१ वर्षका छन्। भन्छन्, ‘मेरो गर्लफ्रेन्ड छे, कलेजमा। बागबजारमा चाहिँ ओभरटाइम गरेको हुँ।’ उनका अनुसार आन्टीका श्रीमान् बागलुङमा छन्। ‘वर्षमा एकदुई चोटिमात्र आउँछन् अंकल,’ अविनाशले भने, ‘आन्टी धेरैजसो एक्लै हुन्छिन्। छोराछोरी पनि छैनन्।
त्यसैले मलाई बोलाइरहन्छिन्।’ यी दुईको चक्कर चलेको दुई वर्ष भयो। केस नं ४:धरानका दीपेश यही अक्टोबरमा इजरायल उड्दै छन्। ‘उतै सेटल हुने गरी जाँदै छु,’ उनले भने, ‘केटी मुसलमान भएकाले बिहे गर्न अलि समस्या भइरहेको छ। मैले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ रे। त्यसका लागि कागजात पठाइसकेँ।
अक्टोबरसम्ममा सबै काम बन्छ होला। ’दीपेश टुरिस्ट गाइड हुन्। पर्यटक घुमाउने क्रममा उनको भेट इजरायलकी अथालियासँग भएको थियो। ‘त्यो बेला नै उसले मलाई खुब मन पराई,’ दीपेश भन्छन्, ‘इजरायल पुगेपछि पनि फोन गरिराख्थी। मेरा लागि ल्यापटप, मोबाइल आदि पठाइदिन्थी।
इजरायलको सरकारी कर्मचारी हो ऊ। पैसा टन्न कमाउँछे। एकदम गाँठवाली छे।’ तिनै ४९ वर्षीया अथालियाको पहलमा २५ वर्षीय दीपेश इजरायल जान लागेका हुन् ‘खै, किन हो, लास्टै माया गर्छे मलाई,’ दीपेश भन्छन्, ‘मैले पनि माया गरेजस्तो गर्दिन्छु। उता गएपछि राम्रो काममा लगाइदिन्छु भनेकी छे।
आफ्नै हातमा धनलक्ष्मी:
आफूभन्दा निकै जेठी महिलासँग हिमचिम बढाउने युवाका चर्तिकला हुन् यी। यस्ता क्रियाकलाप अचेल हाम्रो समाजमा देखिन थालेका छन्। पैसा र मोजमस्तीका लागि अनेक तिकडम अपनाइरहेकाहरू यसलाई पनि एउटा उपायका रूपमा लिइरहेका छन् । ‘काठमाडौँको महँगीमा टिक्न गाह्रो छ,’ शंखमूलका विवेक भन्छन्, ‘भनेको बेला जागिर पाइँदैन। पेट पाल्नका लागि केही न केही त गर्नैपर्छ।’ उच्च शिक्षाका लागि राजधानी आएका उनी भोकै बस्नुभन्दा ‘सुड्डी’ पट्याएरै भए पनि आफ्नो समस्या टार्नु बेस ठान्छन्।
‘त्यसबापत हामीले पनि त सेवा दिएकै हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘लेनदेन दोहोरो छ भने धक मान्नुपर्दैन।’ हामीले भेटेका अधिकांश युवाले पैसाकै लागि पाको उमेरकी महिलासँग ‘रोमान्स’ गरेको बताए। खासगरी उपत्यका बाहिरबाट आएका युवा यस्तो क्रियाकलापमा सरिक हुने गरेको पाइए।
घरबाट पैसा मागिरहनुभन्दा यतै केही व्यवस्था गर्ने निहुँमा उनीहरू आफूभन्दा दोब्बर जेठी महिलाको यौनचाहना मेटाउने काममा लागेका छन्। ‘अरूको यौन चाहना मेटाइदिँदैमा आफ्नो भलो हुन्छ भने त्यसो गर्नु नराम्रो होइन,’ सुकेधाराका अविनाशको तर्क छ, ‘यसमा कसैको हानि–नोक्सानी हुँदैन। बरु, दुवै पार्टीलाई फाइदा हुन्छ।’
२१ वर्षको केटोले ४८ वर्षकी महिलासँग ‘रमिता’ गर्नुको एउटा कारण रमाइलो पनि हो। बागबजारका सुरेन्द्र भर्खरकी युवतीभन्दा अनुभवी महिलासँगको हिमचिम रमाइलो हुने बताउँछन्। ‘सिकारु त झ्याउ लाग्ने खालका हुन्छन्,’ सुरेन्द्र भन्छन्, ‘सबैथोक आफैँले सिकाउनुपर्छ। त्यसमाथि लजाएर र्यााक गर्छन्। अनुभवी भए जसो–जसो भन्यो, उसो–उसो हुन्छ। साह्रै रमाइलो हुन्छ उनीहरूसँग।’
पाको उमेरका महिला होशियार हुने र आफूलाई संकटमा पनि नपार्ने भएकाले सुरेन्द्रको साँठगाँठ उनीहरूसँगै हुने गरेको छ। ‘योङ केटीहरूसँग कहिल्यै लभ गरिएन,’ उनले भने, ‘मोजमस्ती भनेको जान्नेबुझ्नेसँगै गर्नुपर्छ।’ यद्यपि, बिहे चाहिँ उनी आफ्नै उमेरकी केटीसँग गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बिहे भनेको अर्कै चिज हो,’ भन्छन्, ‘यसलाई यस्तो हल्काफुल्का कुरासँग जोड्नु हुँदैन।’ जनमलाई भने आफ्नी पाको उमेरकी प्रेमिकाले आत्मीय साथ र माया दिएको भान हुन्छ। भन्छन्, ‘हामीले थुप्रै पटक शारीरिक सम्पर्क गरिसकेका छौँ। तर, मैले यौन सन्तुष्टि र पैसाका लागि उनलाई प्रयोग गरेको होइन। उनले गर्ने प्रेम अन्य केटीले गर्नेभन्दा परिपक्व छ।
कतिपय युवाले आफ्नो करिअर बनाउनका लागि पनि परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको पाइयो। धरानका दीपेश तिनैमध्ये पर्छन्। पाको उमेरकी महिलासँग बिहे नै गरेर उनी इजरायल उड्दै छन्। पाँचरदश वर्ष मजाले कमाइयो भने जिन्दगी बन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिञ्जेल सम्बन्ध टिक्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन। टिक्यो नै भने पनि मेरा कारण त्यो महिलाले दुःख पाउँदिन। बरु, सुख पाउँछे।
त्यसपछि म आफ्नो बाटो लाग्छु, ऊ आफ्नै संसारमा रमाउँछे। यसमा कसैको हानि हुँदैन।’स्तो सम्बन्ध राख्ने केटाहरू आफूले कसैलाई जबर्जस्ती वा ललाई–फकाई सम्बन्ध नराख्ने भएकाले यो प्रवृत्ति गलत नभएको बताउँछन्। ‘उनी९महिला०हरू आफैँ हामीसँग टाँसिन आउँछन्,’ विवेक भन्छन्, ‘हामीले कसरी नाइँ भन्नेरु’ सुकेधारका अविनाश भने महिलाहरू आफूजस्ता जवान र ह्यान्डसम केटाप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक ठान्छन्। ‘राम्रामा त जसको पनि नजर गइहाल्छ नि,’ उनी भन्छन्।
त्यसो त सबै युवाले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति मात्रै जेठीबाठी महिलासँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छैनन्। कतिपयको त साँच्चै नै माया बस्ने गरेको पनि पाइयो। जनमकै उदाहरण लिऔँ। उनले प्रहरी निरीक्षककी श्रीमतीलाई मनैदेखि माया गरेको बताए। ‘लभ परेपछि उमेर–सुमेरको मतलबै नहुने रै’छ,’ उनी भन्छन्, ‘उसले पनि त्यही ठानेर माया गरिरहेकी होली मलाई।
अब त हामी न छुट्टिन सक्छौँ, न बिहे गर्न सक्छौँ। साह्रै बिलखबन्दमा परियो।’ उनीहरूकै जस्तो हालतमा छन्, गोल्फुटार, काठमाडौँका २२ वर्षीय उदय र ३९ वर्षीय रूपा। ‘छ–सात महिना भयो अफेयर चलेको,’ रूपा भन्छिन्, ‘दुइटा छोरी छन् मेरा। श्रीमान् कोरिया जानुभएको दुई वर्ष भयो। उहाँ आउनासाथ हामीहरूको सम्बन्ध टुटाउनुपर्छ। त्यो दिन सम्झेर आजै आत्तिन्छु।’
यौन नै प्रधान:
युवायुवतीले यस्तो सम्बन्धलाई जति सजिलो रूपमा लिएका छन्, यो उत्तिकै अप्ठ्यारो पैदा गर्ने सम्बन्ध भएको केही अनुभवीले बताए। ग्ल्यामर क्षेत्रमा आबद्ध एक युवाका अनुसार उनले पाँच वर्षअघि आफूभन्दा २१ वर्ष जेठी महिलासँग सम्बन्ध राखे। उनी आफ्नो अप्ठ्यारो सुनाउँछन्, ‘ऊ इभेन्ट म्यानेजर थिई। म भर्खर स्ट्रगल गर्दै गरेको मोडल। ऊसँग नजिकियो भने टन्नै अफर पाइएला भन्ने लोभले खूब भाउ दिएँ।
उसले पनि मलाई सहयोग गरी। तर, यतिविघ्न सहयोग गरी कि आखिरमा उम्किन मुस्किल पर्योस।’ ती महिलाले सुरुसुरुमा सहयोग गरे जस्तो गरे पनि पछि आफूलाई नोकरलाई जस्तो व्यवहार गरेको र उसलाई छोडेर गए भएभरका पोल खोलिदिने धम्की दिएको उनले बताए। ‘म त मर्नु न बाँच्नु भ’को थिँए,’ उनले भने, ‘बल्लतल्ल फुत्किएँ। अहिले त्यो महिला हङकङतिर छे।’ दुई साताअघि धरान–६ की सुमित्रा लिम्बूले आफ्नो ‘श्रीमान्सँग सल्केको’ आरोपमा धरान–९ स्थित ३० वर्षीया गंगा कार्कीलाई खुकुरी प्रहार गरेकी थिइन्।
लगभग ५० वर्षका, सुधीरसिंह लिम्बू सुमित्राका श्रीमान्सँग फोनमा कुराकानी गरेको, सल्किएको जस्ता आरोप लगाई सुमित्राले गंगाको कोठामै पुगेर अनुहार, घाँटी र टाउकोमा जथाभावी खुकुरी प्रहार गरेकी थिइन्। घाइते गंगाको हाल उपचार भइरहेको छ भने सुमित्रा प्रहरी नियन्त्रणमा छिन्। अमिल्दो सम्बन्धको परिणाम कतिसम्म घातक हुन्छ भन्ने एउटा उदहारण हो यो। पछिल्लो समय आफूभन्दा तलमाथि उमेरका व्यक्तिबीच सम्बन्ध कायम गर्ने फेशन चलेको धरानस्थित शुक्रवार संवाददाता गोपाल दाहालले बताए।
भन्छन्, ‘श्रीमान् विदेशमा रहेका महिलाहरू खाइलाग्दा युवकलाई ‘ब्वाइफ्रेन्ड’ बनाइरहेका हुन्छन् भने उमेर ढल्किँदै गएका पुरुष पनि ‘भाञ्जी’ भन्दै नवयौवनाहरूलाई भेडेटार घुमाइरहेका भेटिन्छन्।’
Prevबजारमा नक्कली अण्डाको बिगबिगी, यसरी चिन्नुहोस् सक्कली या नक्कली
Nextकतारमा सुतेकै अवस्थामा एक नेपालीको मृत्यु,,,,,,,,,,,,,,,,रिप लेखेर श्रद्धान्जली दिनुस मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
यस्तो छ भोलिदेखि रिङरोडमा चल्ने बिजुली बस (भिडिओसहित)
सुत्नु अगाडी श्री स्वस्थानी ब्रत कथा भाग-६ सुन्नुहोस ! तपाईको अधुरा काम पूरा हुनेछन, बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोस ठुलो अनिष्ट हुनसक्छ